I-Semalt Yabelana Ngendlela Yokuvimbela Nokususa Ugaxekile we-Google Analytics
Ukuhlaziywa kogaxekile akuyona inkinga entsha, kodwa iningi liye laba yingozi kakhulu kunanini ngaphambili. Lapha isazi esihamba phambili esivela ku Semalt , uLisa Mitchell, sizochaza izindlela ezithile zokuvimba nokukhipha ugaxekile we-Google Analytics. Futhi uzothola umqondo wokuthi zithinta kanjani amasayithi akho.
Into yokuqala oyodingeka wazi ukuthi i-spam analytics iza ngamafomu ahlukene: i-spam spam ne-bot spam - conservazione sottovuoto 35. Zombili lezi fomu zithinta i-Google Analytics yakho kakhulu. Ngakho-ke, indlela yokubhekana nayo kufanele ihluke, futhi ukugxila kwakho kufanele kube ukuthi ungasusa kanjani wonke.
Kuyini i-Bot Spam?
Bot traffic noma bot spam kuyinto evamile futhi eyingozi kunalokho ongalindela. Ezinyangeni zamuva, usulele amawebusayithi angaphezu kwezigidi ezimbili nambili ngenxa yethrafikhi ephansi. Akuwona wonke ama-bots ayingozi noma amabi, noma kunjalo. I-Google, i-Bing, namanye ama-search amakhulu ancike kubhokisini lokusesha uma kuziwa ukukhahlela nokukhomba okuqukethwe kumawebhusayithi. Abaqhamuzi bezohwebo ezifana ne-SEMrush, Pinterest, abalandeli bokudla njenge-FeedBurner, i-Twitter, kanye nokuqapha amabhodi njenge-WordPress, i-Uptime Robot, konke okulungile ukuhamba nabo. Kodwa kufanele wenze okusemandleni akho ukuqeda ama-spam bots athambekele ekubhubhiseni isayithi lakho ngezinga elikhulu.
I-spam bots noma i-crawler ogaxekile yizinhlelo ezenzelwe ukwenza imisebenzi ehlukene, njengokuba imininingwane yakho nedatha, ukufakwa kwe-server, ukugaxeka kwamazwana, ukuhlaselwa kwe-phishing, nokuhlaselwa kwe-DDoS. ezigabeni ezihlukene, ezifana namathuluzi wokuqhaqhafaza, abenzi bokuzenza, abagaxekile, kanye neziqhumane. Abazenza ngabalingisi yibo abasebenzisa izimpawu ezingamanga ukuze bahambisane nezinyathelo zokuphepha zakho. Zisetshenziselwa ukuhambisa ukuhlaselwa kweDDoS. Uhlobo lwesibili ithuluzi lokuqhaqha, elisetshenziselwa ukusakaza i-malware ne-viruses ehlukile. Eminyakeni emibili eyedlule, i-Google yathi amawebhusayithi we-200 wamaphesenti ahlaselwa ngenxa yalolu daba. Ama-Scrapers asetshenziselwa kakhulu ukweba okuqukethwe kwewebhu kanye nedatha. Ezimweni eziningi, izihloko ezintshontshiwe zishicilelwa kwezinye izizinda kanye namaforamu. ukusetshenziswa kwebhodi ukusabalalisa okuqukethwe okuphromotha ngendlela yama-phishing links namazwana.
Kunezindlela ezahlukene zokuvimbela nokususa i-bots negaxekile. Ezinye zazo zixoxwe ngezansi.
Isici se-Bot / Spider Ukuhlunga okuzenzakalelayo
Lesi sici senzelwe i-Google ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Ikuvumela ukuthi uhlole futhi uvimbele ithrafikhi evela kumakheli e-IP engaziwa. Ungakwazi ukuqeda kalula izicabucabu nama-bots ngalolu hlobo. Ungakha izihlungi kwizinhlu ze-IAB / ABC International Spiders & Bots. Izihlungi ezenzakalelayo yizivikelo ezinamandla kunazo zonke ngokumelene ne-bot spam njengoba izingosi ezihlukahlukene ziye zazuza kuwo kakade. Kulula ukusebenzisa futhi ikunikeza imiphumela emihle kakhulu.
Vimbela amabhulogi Usebenzisa i-.htaccess
Enye indlela ukuvimbela i-bots usebenzisa amafayela we-.htaccess. Lesi sici sokuhlunga ngokuzenzakalela sisiza ukususa ama-bots ukuvakashela i-Google Analytics yakho. Ivimbela ukufika kwe-bots, kodwa ayikwazi ukuba isixazululo unomphela kwiwebhusayithi yakho. Uma unokudideka noma imibuzo mayelana nezixazululo ezihlinzekwe lapha, ungangena nathi ngesigaba sokuphawula ngezansi.